Nei yangu iPhone Ichipisa? Yangu Bhatiri Draina zvakare! Iyo Fix. - Iphone
unogona here kudya nyama yemombe uine nhumbu
iphone yangu inoramba ichitangazve pamusoro uye pamusoro
sei foni yangu yakatanga patsva
wifi haizobatanidze pane iphone
Nei yangu iPhone Ichipisa? Yangu Bhatiri Draina zvakare! Iyo Fix.
Rimwe rematambudziko akajairika andaimboona seApple tekinoroji yaive iPhones dzaipisa zvakanyanya. Dzimwe nguva iPhone yaingonzwa kudziya zvishoma pane zvayaifanira, uye dzimwe nguva kumashure kweiyo iPhone kwaipisa zvekuti yainzwa kunge inogona kupisa ruoko rwako. Chero nzira, kana iwe uine inopisa iPhone, iPod, kana iPad, zvinoreva pane chakaipa . Rega ndifembere:
Yako iPhone Yebhatiri Iri Kudhonza Zvakare? Iwe Hautaure!
Kana iwe uchitsvaga nzira dzakanakisa dzekuvandudza yako iPhone bhatiri hupenyu , tarisa chinyorwa changu chinonyanya kufarirwa, 'Nei Yangu iPhone Bhatiri Inofa Nokukurumidza' , kune matipi akatobatsira kare mamirioni yevanhu. Mukati ichi chinyorwa, Ini ndichatsanangura kuti nei iPhone yako iri kupisa zvakanyanya uye ndinokuratidza chaizvo maitiro ekuigadzirisa. Kana iwe usina hanya nazvo sei yako iPhone inopisa uye inoda skip kurudyi kune iyo kugadzirisa , zvakanaka futi.
Kana iwe uchida kutarisa pane kuverenga, tarisa yedu Chii chingaitika kana iwe ukabatirira chitambi chesimbi kwemaawa nemaawa, uchisunda injini zvakanyanya sezvainogona kuenda? Injini yaipisa zvakanyanya uye yaishandisa gasi yakawanda. Ndizvozvo chaizvo chii chiri kuitika kune yako iPhone.
Yako iPhone's CPU ine simba zvekuti haiwanzoshandisa 5% yekugona kwayo. Kana iwe uchiverenga peji ino uchishandisa Safari pane yako iPhone, yako iPhone inofanirwa kuve yakanaka uye inotonhorera: Uri kumhara. Paunovhura app seSafari, sekumhanyisa kubva pachiteshi, yako iPhone inoshandisa zvimwe CPU kuita kuti zvinhu zvifambe asi zvishoma zvishoma kana iko iko iko kutakurwa.
IPhone yako iri kupisa nekuti iyo CPU yakavandudzwa kusvika ku100% kunyangwe kana iyo skrini yadzimwa uye iri muhomwe yako.
Muna 99% yezviitiko, kana yako iPhone ichipisa, une dambudziko re software. Izvo zviri kutaurwa, kana iwe ukadonhedza foni yako mumugomo wemvura uye ipapo yakatanga kupisa, unogona kunge uine dambudziko rehardware. Kana yako iPhone yaoma, ramba uchiverenga:
Kusiyana nemota yako ine mutyairi mumwe chete anodzora injini, iyo iPhone ine akawanda 'madhiraivha', kana maapplication, imwe neimwe inomhanya panguva imwe chete uye iine yavo 'accelerator pedals' inokwanisa kudzora iyo CPU nzira yese kusvika zana %. Imwe yemapurogiramu ako yaenda zvakashata uye iri kubata chitiviri kune simbi. Basa rako, kana iwe ukasarudza kuzvigamuchira, ndere kutsvaga kuti ndeipi app iri kuita zvisizvo uye woimisa.
Ndimi mutikitivha, uye ndinoziva kuti munokwanisa kubata basa iri. Ndiri kuzokuudza chaizvo maitiro ekuona kuti ndechipi app chiri kukonzeresa kuti yako iPhone ipise uye kuti ungaimisa sei. Tichatanga nemhinduro dzakareruka kutanga, uye kana dambudziko rikaramba riripo, ndinokuratidza maitiro ekurova dambudziko rinopisa re iPhone ne 'sando hombe' saka isu ziva zvakagadzirirwa zvakanaka.
Maitiro Ekuona Uye Kugadzirisa An iPhone Iyo Inowana Hot
1. Vhara maPurogiramu ako
Kutanga zvinhu zvekutanga: Tinofanira kurerutsa mutoro webasa pane yako iPhone zvakanyanya sezvinobvira, saka regai vhara maapplication ako . Tinya kaviri Pamba Bhatani (bhatani rakatenderera pazasi pechiratidziro che iPhone yako, uye swipe app yega yega (kunze kweiyi, kana uchiverenga pane yako iPhone) pamusoro pechidzitiro.
Kana yako iPhone isina Bhatani repamba, vhura iyo switcher yeapps nekukwidza kumusoro kubva pasi chaipo pechidzitiro kusvika pakati pechidzitiro. Rova zvakasimba Anwendung kumusoro uye kubvisa pamusoro chidzitiro kuvhara iyo iPhone wako.
Paunenge wapedza, tinya paSafari uye dzoka udzokere kuchinyorwa chino!
2. Tarisa Zvekupaza Mapurogiramu: Chikamu 1
Mangani maapplication anga achipwanya pane yako iPhone?
Zvibvunze, “IPhone yangu yakatanga riini kupisa? Zvanga zviri chaizvo mushure mekunge ndaisa imwe app? ' Kana zvirizvo, icho chaicho app chinogona kunge chiri mutadzi.
Unoda zano? Musoro kune Zvirongwa -> Zvakavanzika -> Analytics & Improvements -> Analytics Data kune runyorwa rwezvinhu zvese zvave zvichirovera pane yako iPhone.
wachi yangu yeapuro haizobhadharisi
Zvakajairika kuona zvakapetwa zvishoma mune urwu runyorwa nekuti mafaira erogi anoperera pano futi, asi kana iwe ukaona iyo imwecheteyo app yakanyorwa yakadzokororwa, waita dambudziko neapp iyoyo. Ongorora: Kana dambudziko ranga richiitika kwechinguva uye iwe usingazive kuti ndeipi app yatanga dambudziko, ndizvo zvakanaka futi - ingo rovera pasi unotevera nhanho.
Haasi ese maApplication maApp Akagadzirwa Akaenzana
Uine anopfuura mamirioni 1 maapplication muApp Store, unogona kuva nechokwadi kuti pane mashoma ane bhagi kana maviri. Kana uchikwanisa, edza kurodha pasi akasiyana app ayo anoita chaizvo zvakafanana chinhu. Semuenzaniso, kana iwe ukakopa 'Bird Sounds Pro', edza 'Songbird' kana 'Squawky'.
Kana iwe usingakwanise kuyedza akasiyana app, edza kuidzima uye kuisazve kubva kuApp Store. Dhinda uye ubatisise icon yeapp paImba skrini kusvikira iyo yekukurumidza menyu menyu yaonekwa. Wobva wadzvanya Bvisa App -> Delete App -> Delete kuti uninstall Anwendung.
Kuti udzorezve iyo app, vhura App Store uye shandisa iyo Yekutsvaga tebhu kuti uiwane. Wobva wadzvanya iyo icon icon kuti dzorerazve iyo app pane yako iPhone.
3. Tarisa Zvekupaza Mapurogiramu: Chikamu 2
Kana yako iPhone's CPU iri injini, bhatiri rayo ndiro gasi. Kana app iri kushandisa yakawanda yehupenyu hwebhatiri, irikuteresa yako iPhone's CPU. An app inogona kunge ichirovera kumashure kwe iPhone yako kana ikashandisa zvisingaenzaniswi huwandu hwebhatiri.
Enda ku Zvirongwa -> Bhatiri uye tarisa pane runyorwa rwemaapplication muChikamu Chekushandisa cheBattery kuti uone kuti ndeapi maapplication ari kushandisa hupenyu hwebhatiri zvakanyanya uye kuona maapplication anogona kunge ari kukonzera kuti iPhone yako ipise.
4. Dzorera Yako iPhone Kubva uye Kudzoka Pairi
Icho chiri nyore kugadzirisa, asi kudzima yako iPhone kure uye kumashure kunogona kugadzirisa zvinhu zvidiki zvinoungana nenguva. Kana imwe yeaya mapurogiramu esoftware yaikonzera kuti iPhone yako ipise, dambudziko rakagadziriswa.
Kana iwe uine iPhone 8 kana yekare modhi, Dhinda uye ubatisise bhatani remagetsi kusvikira 'kutsvedza kumagetsi kudzima' ichioneka pachiratidziri. Kana uine iPhone X kana modhi nyowani, tinya ubatise bhatani repadivi uye kana vhoriyamu kana vhoriyamu pasi bhatani panguva imwe chete kusvikira 'kutsvedza kumagetsi kudzima' kuoneka.Wobva washandisa munwe wako ku Rova zvakasimba simba kuvake mhiri chidzitiro .
Zvakajairika kuti yako iPhone itore masekondi makumi maviri kana makumi matatu kutendeuka nzira yese. Kudzoreredza yako iPhone, dzvanya uye ubatise iyo simba (iPhone 8 uye kupfuura) kana padivi bhatani (iPhone X uye nyowani) kusvikira iyo Apple logo iratidzike pachiratidziro, wobva warega.
5. Ita shuwa Kuti Mapurogiramu Ako Ari Kusvika Parinhasi
Vagadziri veApp (izwi rinosarudzika revashandisi vemakomputa vanoita maapplication eApple) havawanzo kuburitsa zvigadziriso kuti vawedzere maficha matsva - yakawanda yenguva, kuwedzeredzwa kwesoftware yakagadzirirwa kugadzirisa zviputi. Sezvatave takurukura, software bugs dzinogona kukonzera yako iPhone kuti iwedzere kupisa, saka zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti maapplication ako ndeazvino.
Vhura iyo App Store uye tora yako Akaundi icon mune yepamusoro kurudyi-kona yekona. Bhura pasi pasi uone kana paine chero maapps ekuvandudza anowanikwa. Tinya kunatsurudza padhuze nechero app yaunoda kugadzirisa, kana tinya Gadziridza Zvese kugadzirisa zvese zveapp kamwe chete.
6. Gadziridza Yako iPhone's Software
Mubvunzo unotevera: 'Pane software here inowanika pa iPhone yangu?' Apple nguva nenguva inoburitsa inogadziridza software inogadzirisa nyaya dzinomuka, dzimwe dzacho dzinogona kukonzera mamwe maapps kuti aite zvisirizvo uye yako iPhone ipise. Kuti utarise, musoro ku Zvirongwa -> General -> Software Kwidziridza .
Kana inogadziridza iripo, edza kuiisa - inogona kugadzirisa dambudziko rako. Ongorora: Kana yako iPhone ikati iyo yekuvandudza haigone kuiswa nekuti hapana yakakwana nzvimbo yekuchengetera, unogona kubaya yako iPhone mukombuta ine iTunes kana Finder uye shandisa komputa kugadzirisa software yako. Mune mamwe mazwi, kana iwe ukashandisa komputa kukwidziridza yako iPhone software, haufanire kudzima chero chinhu kusunungura nzvimbo pafoni yako.
7. Seta Zvese Zvirongwa
Kana iwe waedza nhanho dziri pamusoro uye yako iPhone ichiri kupisa, Dzorerazve Zvese Zvirongwa nekunanga ku Zvirongwa -> General -> Seta Zvese Zvirongwa .
Kubaya 'Seta Zvese Zvirongwa' kunobvisa mapaswedi eWi-Fi (saka ita shuwa kuti iwe unoziva yako usati waita), kugadzirisazve Wallpaper rako, uye kudzorera mamwe marongero kune avo vanokanganisa mukati meiyo Zvirongwa app. Izvo hazvibvise chero yeiyo data pane yako iPhone. Ndakaona ichigadzirisa matambudziko nemaapps asina kunaka.
8. Iyo Huru Nyundo: DFU Dzosera iPhone Yako
Kana iwe waita matanho ese ari pamusoro uye yako iPhone ichiri kupisa, inguva yekurova dambudziko nayo sando huru. Une rakadzama software dambudziko rinoda kubviswa. Tava kuenda negadziriro yeparutivi iPhone wako iCloud, DFU kudzorera foni yako uchishandisa iTunes kana Finder, uye kudzorera kushandisa kwako iCloud negadziriro yeparutivi.
Iwe unogona zvakare kushandisa iTunes kana Tsvaga kutsigira uye kudzorera foni yako, asi ini ndaona mhedzisiro iri nani 'mumunda' uchishandisa iCloud. Chinyorwa chekutsigira cheApple chinoratidza maitiro ekumisikidza uye kudzorera kubva kuICloud backup mumatanho matatu. Kana iwe (sevamwe vazhinji) wapererwa nechengeto nzvimbo paICloud, ini ndanyora imwe chinyorwa chinotsanangura sei kugadzirisa iCloud negadziriro yeparutivi saka haumbofi kupera nzvimbo zvakare.
Tevere, shandisa iTunes (PC uye Mac inomhanya macOS 10.14 kana kupfuura) kana Tsvaga (Macs inomhanya macOS 10.15 kana nyowani) ku dzosai yenyu iPhone kuti fekitari pazviruva . Mushure mekunge zvaita uye yako iPhone inoti mhoro pachiratidziri, bvisa yako iPhone kubva pakombuta (ehe, izvi zvakanyatsoita kuita) uye uteedzere matanho ari mu